China Bhasiketi ngowani vagadziri uye vanotengesa | Chapman
✭ Tinogona kuita ese marudzi ngowani ngowani muforoma sezvo mutengi zvinoda, chitaurwa anogona kupa kupa kwakavakirwa mutengi kuti kudhirowa kana mharidzo. muforoma yedu zvose zvakaisvonaka yepamusoro uye anonzwisisika mutengo.
✭ Iyi epurasitiki chikamu chikamu cheBhasiketi ngowani kubva kuUSA mutengi. Iyi seti yeforoma inotora iyo HASCO standard. Iyo Core zvinhu ndeye 1.2343 (ESR) yakaoma simbi. Chimiro chichiumbwa chiri nyore, iine ina yakazvimirira yepakati inoisa zvivakwa. Chigadzirwa icho chinhu PP zvinhu zvepurasitiki, uye pamusoro panofanirwa kuve nePolish600. Iyo nguva yekuendesa ndiyo mazuva makumi mashanu, uye jekiseni iri 37 masekondi. Maumbirwo echimiro ichi akaomarara, aine mana makuru ekutsvedza uye maviri makuru anosimudza. Iyo ejection inotora yakatsiga jacking pamwe push block block ejection.
✭ Dhizaini yekufambisa dhizaini inofanirwa kuve yakaganhurwa zvakaenzana kuona kuti chigadzirwa chinogona kutonhorerwa zvakafanana. Ita kuti chigadzirwa chibudirire yepamusoro-chaiyo saizi uye yepamusoro mhando chitarisiko.
✭ Kana iwe uine zvigadzirwa zvakafanana, ndapota inzwa wakasununguka ngatiitei isu mafomu iwe. Yedu mhando uye sevhisi ndiyo yakanyanya kunaka.
Muforoma NO. CPM-191009
Pamusoro Pedza Maitiro ChiPolish # 600
Zvinyorwa zvePurasitiki PP
Chikamu uremu 300g
Chikamu chemazana 320mm X 230mm X 210mm
Saizi yekukura 650 X 600 X 531mm
Mould Zita Ngowani yebhasikoro
Muforoma mhango 1 * 1
Mumhanyi Mhanya mhanya wePoint gate
Mould Material 1.2343ESR / 1.1730 / 1.2767
Mould Hupenyu Kutenderera 500,000
Lead Nguva 45mazuva
Muforoma Kutenderera Nguva: 37's
Bhasikoro traumata yakajairika uye kunyanya matambudziko eurouriki anotungamira mukuremara uye kufa mumatanho ese ehupenyu. Kuongorora uku kunounganidza zvakawanikwa munguva pfupi yapfuura zvine chekuita nekutsvaga mumunda webhasikoro traumata yakasanganiswa nechinhu chebhasiketi yekushandisa ngowani. Iyo nzvimbo yekutsvagisa bhasikoro yekushungurudzika ndeyezvisikwa multidisciplinary uye yakakosha kwete chete kune vanachiremba asiwo kune nyanzvi nedzidzo, mainjiniya, matare, kugadzirisa uye ruzhinji hutano mabasa. Nekuda kweizvi kuwanda kwezvinyorwa zvepasirese uye zvidzidzo zvakakosha, ongororo pfupi yenguva inobatsira kuona kwazvino mafambiro ekutsvagisa uye nekupawo ruzivo kubva kunharaunda dzevavakidzani dzevaongorori. Zvinogona kutaurwa kuti kusvika parizvino, kuti kunyangwe hombe yakawanda yekutsvagisa yakaitwa munzvimbo ino zvimwe zvidzidzo zvinodiwa kuongorora nekuvandudza mamiriro akasarudzika uye zvinodiwa munzvimbo dzakasiyana, mazera, nyika uye kugadzira zvirongwa zvinobudirira zvekudzivirira musoro wakakomba uye kukuvara kumeso uchichovha bhasikoro.
Mufananidzo: Iyo ngowani inochengetedza sei hupenyu hwako: Kana iwe uchinge warova musoro wako, iro rakaomarara rekunze ganda (dema) rinoparadzira kukanganisa kwenzvimbo yakafara. Iyo yese yakapfava yemukati liner (orenji) zvino inotora simba zvakaenzana saka (ndinovimba) pane zvishoma kukuvara kumusoro wako.Pasina ngowani, iko kukanganiswa kwese kwaizotenderedzwa pachikamu chidiki chemusoro wako, chingangoita kutyora dehenya rako uye zvingangodaro zvichikuvadza huropi hwako zvakare.
Pakutanga kuona, ngowani yekutenderera inotaridzika senge chero imwe ngowani, asi tarisa zvakanyanya uye iwe uchaona zvakanyanya kufunga-nesainzi - zvapinda mukugadzirwa. Ngowani chaiyo ine zvikamu zviviri zvikuru: goko rekunze rakaomarara uye liner remukati rakapfava. Iko rakaomarara goko rakagadzirirwa kutambanudza simba rezvinokanganisa pamusoro penzvimbo yakafara kuitira kuti dehenya rako riite kashoma kutsemuka, nepo liner rakapfava richifanirwa kupinza mukati nekutora simba rekukanganisa, zvishoma zvaro rinotumirwa kumusoro wako.
Vanhu vaifunga kuti ngowani dzemabhasikoro dzaive dzisina kutonhorera, asi izvo zvese zvachinja izvozvi. Iwe hausi kuzowana chero nyanzvi yekuchovha bhasikoro mumugwagwa kana track isina helmete yakasungwa zvine mutsindo kumusoro wavo. Uye ngowani dziri nani zvikuru kupfuura zvavaimboita. Wakamboona here kutonhorera kwevanotyaira mabhasikoro eOlympic mune avo vane misodzi yakaita chombo chrono? Zvinenge zvese ngowani yemazuva ano yekutenderera ino swish zvinoshamisa uye inogona kuita kunyangwe anononoka kune vatasvi kucheka kumhara. Izwi rimwe reyambiro, zvakadaro. Wese munhu anoda kutaridzika zvakanaka, asi yeuka kuti ngowani yekutenderera inonyanya nezve kuchengetedzwa. Fussy, zvakawedzera zvakajairika kazhinji zvinongova zvekushambadzira - saka usatambisa mari yako.
Pashure: Car Zvikamu Mould
Zvadaro: Mafirita emafuta Mafuta epurasitiki
Car Zvikamu Mould
Mafirita emafuta Mafuta epurasitiki
Control Unit uye Charge Connector pasi pevhavha